वाजरा (डोरे): बौद्ध धर्म को एक प्रतीक
बौद्ध धर्म मा एक प्रतीकको रूपमा वाजरा (डोरेज)
तिब्बती बौद्ध धर्म मा अनुष्ठान वस्तु
Vajra शब्द एक संस्कृत शब्द हो जुन सामान्यतया "हीरा" वा "थन्डरप्लेट" को रूपमा परिभाषित गरिन्छ। यो एक किसिमको युद्ध क्लब को परिभाषित गर्दछ जुन यसको नाम आफ्नो कठोरता र अयोग्यता को माध्यम ले प्राप्त गर्यो। भिजरा तिब्बती बौद्ध धर्म मा विशेष महत्व छ, र यो शब्द बौद्ध धर्म को वैज्रेना शाखा को लागि एक लेबल को रूप मा स्वीकृत गरिन्छ, जसको बौद्ध धर्म को तीन प्रमुख रूपहरु मध्ये एक छ। भेल क्लब (ghanta) साथ भिराज क्लब को दृश्य आइकन, तिब्बत को वैज्रेना बौद्ध धर्म को प्रमुख प्रतीक बनाइन्छ।
एक हीरा निर्बाध शुद्ध र अविनाशकारी छ। संस्कृत शब्दको अर्थ अनावश्यक वा अभूतपूर्व छ, टिकाऊ र अनन्त छ। जस्तै, शब्द भिजुराले कहिलेकाहीं प्रकाशको प्रकाश-बोल्ट शक्ति र शान्ताटा को निरपेक्ष, अपरिहार्य वास्तविकता, "खालीपन" लाई बुझाउँछ।
बुद्ध धर्मले शब्दका अनुसार तिनीहरूका थुप्रै कथाहरु र प्रथाहरुलाई एकीकृत गर्दछ। वजुराण त्यो स्थान हो जसले बुद्धलाई प्रबुद्धता प्राप्त गर्यो। भिराज अदन शरीर मुद्रा कमल स्थिति हो। उच्चतम ध्यान केंद्रित मानसिक राज्य वाज सममा छ।
तिब्बती बौद्ध धर्म मा एक ऋणी वस्तु को रूप मा वाज
भिजरा पनि तिब्बती बौद्ध धर्म संग सम्बन्धित एक शाब्दिक अनुष्ठान वस्तु हो, जसको नाम तिब्बती नाम, डोरे भनिन्छ । यो बौद्ध धर्म को वैज्रेना विद्यालयको प्रतीक हो, जुन प्रविधि शाखा हो जुन अनुशासनले अनुयायीलाई एक जीवनकालमा उज्ज्वल प्राप्त गर्न को लागी अनुमति दिएको छ, एक थन्डरप्लेट फ्लाइटमा अविनाशकारी स्पष्टताको।
भिषा वस्तुहरू सामान्यतया कांस्यबाट बनाइएका छन्, आकारमा भिन्न हुन्छन्, र तीन, पाँच वा नौ प्रवक्ताहरू छन् जुन सामान्यतया कमल आकारमा प्रत्येक अन्तमा बन्द हुन्छ। प्रवक्ताको संख्या र तिनीहरूले अन्तमा भेट्ने तरिका धेरै प्रतीकात्मक अर्थ छन्।
तिब्बती अनुष्ठान मा, भिषा प्रायः एक घंटी (गुन्टा) संग एक साथ प्रयोग गरिन्छ।
वाजा बायाँ हातमा राखिएको छ र पुरुष सिद्धान्त ओराया को प्रतिनिधित्व गर्दछ, कार्य वा सार्थक को संदर्भित गर्दछ। घंटी दाँया हातमा राखिएको छ र महिला सिद्धान्त - प्रजनन वा बुद्धिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
दोहरी डोरे, वा भिववराज , दुई डोरेजहरू क्रसको रूपमा जोडिएको छ। एक डबल डोरा भौतिक संसार को नींव को प्रतिनिधित्व गर्दछ र केहि तंत्रिक देवताओं संग जुडे पनि छ।
तान्त्रिक बौद्ध इकोनोग्राफीमा वेजरा
प्रतीकको रूपमा वेजरा बौद्ध धर्मलाई अघि बढाउँछ र पुरातन हिन्दू धर्ममा पाइन्छ। हिन्दू बारिश देवता इंद्र, जसले पछि बौद्ध साकाराको चित्रमा विकसित भएको थियो, उनीहरूको प्रतीकको रूपमा थन्डरबोल्ट थियो। र 8 वां शताब्दीको टान्टिट्रिक मास्टर, पद्मम्बोभाभाले तिब्बतको गैर-बौद्ध देवतालाई विजय हासिल गरे।
तांबेलिक इमेजोग्राफीमा, थुप्रै तथ्याङ्कहरू प्रायजसो वाजरा राख्छन्, जसमा वाज्रासट्टवा, वाजपेराणानी, र पदमसमम्भा सहित। वाजरेल्टटवा एक शान्तिपूर्ण खुसीमा देखाएको छ जसलाई उनको हृदयमा राखिएको थियो। क्रोधपूर्ण वाजपार्नीले आफ्नो टाउको माथि हतियारको रूपमा लिन्छ। जब हतियारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, यो प्रतिद्वन्द्वीलाई चुरोट गर्न फेंकिएको छ, र त्यसपछि उहाँलाई एक वाजर लुसोको साथ बाँध्नुहोस्।
वाज रैजुअल वस्तुको प्रतीकात्मक अर्थ
वाजराको केन्द्रमा एक सानो फ्लाक्टेड क्षेत्र हो जुन ब्रह्मांडको आधारभूत प्रकृति को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
यो सर्वोच्च मानव (लटका) द्वारा छापिएको छ, कर्म, अवधारणात्मक सोच र स्वतन्त्रताको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै धर्महरू। क्षेत्रबाट बाहिरका प्रत्येक पक्षमा तीनवटा छल्लेहरू छन्, जसले बुद्ध प्रकृतिको तीन-गुना प्रक्षेपण गर्दछ। आगामी प्रगतिको रूपमा हामी अर्को भेगमा फेला पर्यो अर्को प्रतीक फूलहरू, शिमरामा (दुखाइको अन्तहीन चक्र) र निर्वाण (शिमराबाट मुक्त)। बाह्य प्रक्षहरू मकार, समुद्र राक्षसहरूको प्रतीकहरूबाट उभरन्छन्।
Prongs को संख्या र तिनीहरूसँग बन्द वा खुला टाइनहरू चर हो कि छैन, विभिन्न ढाँचाहरू फरक प्रतीकात्मक अर्थहरू छन्। सबै भन्दा साधारण रूप पाँच-प्रक्षेपण भराज छ, चार बाह्य प्रक्षहरु र एक केन्द्रीय प्रong संग। यी पाँच तत्वहरू, पाँच विषाणुहरू र पाँच बुद्धिहरूको प्रतिनिधित्व गर्न विचार गर्न सकिन्छ।
केन्द्रिय प्रङ्ग को टिप प्रायः टाढा पिरामिडको रूपमा आकारित हुन्छ।
पाँचौं बौद्ध धर्म
सबै गुरु नानक को जीवन को बारे मा
क्रिस्टियन डेमोमेन्सनको संयुक्त चर्च
टाटागाटा: यो कसले चलाएको छ
राजा मिलिंडाका प्रश्नहरू
बोधिसटावा के हो?
के कर्जा प्राकृतिक आपदाहरूको कारण हो?
एक्यूप्रेचर खजाने: लाओ गोंग - पेरिकर्डियम 8
अमृतसर मा गोल्डन मंदिर र अकल तखत को इतिहास
Jizo Bosatsu र उनको भूमिका
किन गीला कुकुरहरू यति बिर्सियो
तराईवा: विशेष राजनैतिक घटनाहरु रमजान को प्रार्थना
11 महत्वपूर्ण ब्ल्याक लोक संगीत कलाकार
रूखहरू र Watersprouts सँग पेडहरू व्यवस्थापन गर्नुहोस्
जब तपाईं अधिनियम लिनु हुन्छ?
Siddhartha को लागि पुस्तक सारांश
रसायन विज्ञान मा आवधिकता परिभाषा
ढोकाको लागि उपवास नियमहरू सिक्नुहोस्
स्वैप रक के हो?
डिस्काउन्ट कारक के हो?
ओसामा बिन लादेन को छ पत्नीहरु
ग्रेट Gatsby अध्ययन प्रश्नहरू
प्रिक्याम्बियन समय स्प्यान
Gokouun ओ inorimasu - सरल जापानी वाक्यांशहरु
रेजस उपनाम अर्थ र उत्पत्ति
एक कलेज को अस्वीकार को लागि नमूना अपील पत्र
संघीयता को परिभाषा: Reinvigorating राज्य को अधिकार को लागि मामला
रासायनिक संरचना को पृथ्वी को क्रस्ट - तत्वहरु
के जान्छ स्वर्ग जान्छ ?: पछि पशु जनावर चमत्कार
सातौं दिन एडभेस्टस्टिस्ट इतिहास
तपाईंको डिसर्टन पूरा गर्न प्रोन्स्टिटिटिङ रोक्नुहोस्